Miorina amin'ny takian'ny mpanjifa, ny ekipa injeniera dia nifidy ireo sela, nanao ny BMS, nameno ny sela, nanao ny fitsapana. Izahay dia manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny vahaolana mihodina. Kitapo bateria vita amin'ny Custom vita amin'ny sela bateria LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony.100% Antoka tena izy. Azafady mba ampahafantaro anay maimaimpoana miaraka amin'ny tetikasan'ny bateria.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina dia injeniera 30 eo ho an'ny ekipa PLM R&D ao anatin'izany ny 5 PHD, 10 MFD ary ny bakalorea 15. Fitaovam-pamokarana vita amin'ny 30 eo ho eo, fitaovana roa nubit Semi-automatique ary 8 famokarana 8 ao amin'ny orinasa.
Fandefasana ara-potoana: Ao amin'ny PLM dia takatray fa ny iray amin'ireo fitakiana lehibe indrindra ilain'ny mpanjifanay dia ny fandehanana ara-potoana. Izahay dia miahy ny fivoaran'ny fandefasana toy ny kalitao. Kalitao tsara indrindra: Ny vokatra manome antoka izay misy kalitao tsara indrindra no laharam-pahamehana indrindra. Izany no antony andidiantsika foana ny mampiasa vola amin'ny teknolojia avo lenta ao amin'ny foiben'ny R&D. Vokatra manokana: Anisan'izany ny banky herinaratra manify indrindra eto an-tany, PLM dia manolotra vokatra faran'izay tsara indrindra hamaly ny filan'ny mpanjifa sy ny fitakiany. Serivisy ho an'ny mpanjifa: Ny ahiahy miverimberina ifampizaràn'ny mpanjifa anay dia ny filàna traikefa azon'ny mpanjifa azo itokisana ary mikarakara ireo fanontaniana rehetra alohan'ny sy aorian'ny varotra isika.
Ny fananana lisitry ny fananana ShockSohibTM
Shenzhen Polymer Battery CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2014, mpamokatra bateria lithium ion matihanina manana tantara 5 taona mahery any Shina. Ny vokatra lehibe dia batterie polymer azo tsapain-tanana, kitapo 18650 bateria, bateria e-bike, fonosana bateria lithium na tetik'asa fanamboarana bateria namboarina manokana. Afaka manome vahaolana iray sy dingana iray avy amin'ny bateria mankany amin'ireo singa bateria izahay araka ny takian'ny mpanjifa.
Antsipiriany momba ny vokatra: Fampiharana: Kilalao, Applian an-trano ...
Detail amin'ny vokatra: Modely: Nomeraly PLM18650-4S1P ...
Ny vidin'ny orinasa UL nankatoavin'ny famakafakana 22.2v 900mah ...
Antsipirian'ny vokatra: maodely: bateria PLM-NH2057QE34 ...
Ny bateria maranitra CPAP miaraka amin'ny fananganana herinaratra ao ...
Fivarotana mafana 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Antsipiriany momba ny vokatra: Model: PLM-36v20ah Battery Pa ...
Fivarotana bateria mivantana mivarotra 5000mah 3.7v li -...
Antsipirian'ny vokatra: Fampidirana ny vokatra amin'ny PL ...
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany manaraka ny fitsipiky ny kalitao aloha. Ny vokatra azontsika dia nahazo laza tsara teo amin'ny indostria sy valuabletrusty teo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ...
COVID-19 no miteraka ny fangatahan'ny bateria malemy, Sams ...
Nianatra i Battery.com fa ny Samsung SDI, a ...
Northvolt, jiro voalohany any Eropa ...
Raha ny fampitam-baovao avy any ivelany, ny E ...
Niakatra ny fitomboan'ny vidin'ny kobalt ...
Tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020, total impo ...